Rangoon family excluded from electoral roll | မဲရုံမှာ မဲစာရင်းမပါ။
A Rangoon citizen told Burma Election Tracker: "Our whole family didn't vote in advance, and we weren't able to vote at the polling station on election day because we were not in the voting list." | တအိမ်လုံးအားကြိုတင်မဲကောက်ခြင်းမရှိ၊မဲပေးရမည့်နေ့ တွင်လည်းမဲရုံတွင်စာရင်းမပါဟုပြောသဖြင့်မဲမထည့်ရပါ။
Election Commission destroys votes in Pegu | အငြင်းပွား မဲစာရင်း ဖျက်ဆီးဖို့ ၀န်ထမ်းတွေကို ကော်မရှင်ညွန်ကြား
According to Radio Free Asia, the township Election Commission secretly ordered the staff to destroy the ballots which had been cast in western township of Pegu division. | ပဲခူးတိုင်း အနောက်ခြမ်း မြို့ နယ်မှ မဲစာရင်းပြုထားသည့်မှတ်တမ်းများကို ဖျက်ဆီးရမည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဝန်ထမ်းများကို လျှို့ ဝှက်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ Source: Radio Free Asia
4000 eligible voters taken off voting list in Sagaing Division / တိုင်းရင်းသားမဲပေးနိုင်သူများကို စာရင်းဖယ်ထားခြင်း
4000 people who were eligible to vote in Chin ethnic Hluttaw (Congress) were removed from the voting list, according toaresident.
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ တမူးမြို့နယ်မဲ ဆန္ဒနယ်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်တွင် မဲပေးနိုင်သူ ၄၀၀၀ ခန့် ကို မဲစာရင်းတွင် မထည့်ကြောင်း ပြောကြသည်။ Source: Khonumthung
Voting not secret in Rangoon, groups allowed in to the voting booth, where Election Commission watched people vote / မဲပေးရာတွင်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊လျှို့ ဝှက်မဲပေးနစ်အားချိုးဖောက်နေခြင်း။
Inside networks working in Burma have told Burma Election Tracker that in Rangoon Division,afemale voter was not able to vote freely. She was disturbed becauseamember of the Election Commission watched her and other voters. Furthermore, he let voters go to the voting booth to vote in groups and watched when they voted and for which party.
USDP members urge voters to vote for the USDP and then puts votes in ballot boxes / USDP ပါတီများမှမဲပေးလာသူကိုယ်စားမဲထည့်နေခြင်း။
Inside networks working in Burma tell Burma Election tracker that in Rangoon Division, female members of the USDP told the voters to tick the symbol of the USDP and then the USDP members put these ballot papers into ballot box themselves.
ဒဂုံမြို့ သစ်တောင်ပိုင်းမြို့ နယ်၊(---x)ရပ်ကွက်ရှိမဲရုံအမှတ်(၄)တွင်USDP ပါတီဝင်အမျိုးသမီးများမှမဲရုံအတွင်းမဲလာထည့်သောပြည်သူများအားUSDP ပါတီတံဆိပ်နံဘေးတွင်အမှန်ခြစ်ခိုင်းကာထိုမဲပြားများကို၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်မဲပုံးများသို့ ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။
Local SPDC brought 300 absentee votes to polling station in Northern Shan State / ပန်ရုတ်ကျေးရွာတွင် မဲအပိုများ ယူဆောင်
In villages such as Panyote, Manpalaung and Saykin, Nam Hkam Township, Muse District, Northern Shan State, the staff of Ward Peace and Development Council brought 300 additional absentee votes, which are supposed to be handled by the Election Commission, for the USDP to the polling station, saidaresident.
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ပန်ရုတ်၊ မာန်ပလောင်းနှင့် စေကင်းကျေးရွာရှိ မဲမထည့်သူကိုယ်စား မဲထည့်ရန်အတွက်ဆိုပြီး ယကယစာရေးက မဲအပို ၃ဝဝ ကို ယူဆောင်သွားပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ USDP အတွက် မဲထည့်ရန်ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
Election Commission changes votes cast for opposition parties into USDP votes / မူဆယ်မဲရုံမှူးများ ညဘက်အချိန်တွင် မဲများ အသဲအသန်ပြင်
In Muse Township, Northern Shan State, the Election Commission changed many votes that people cast for other parties into votes for the USDP, on November6from9pm to 10 pm and put security guards around the polling station, said an eye witness.
USDP buys votes in Northern Shan State / ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ ပိုက်ဆံပေးပြီး မဲဝယ်နေ
In Man Aung village, Nam Khan Township, Northern Shan State, the Union Solidarity and Development Party (USDP) paid 10 000 Kyats (nearly 10 $) per vote and in Pha Lin village the USDP paid 500 000 Kyats (nearly 500 $) to one resident to buy 100 votes, said residents.
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မန်အောင်ကျေးရွာ ဒေသခံများအား ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ USDP က တဦးလျှင် ကျပ်ငွေ ၁ဝ,ဝဝဝ စီပေး မဲဝယ်ခိုင်းနေပြီး ဖလင်ကျေးရွာတွင်လည်း USDP က ဒေသခံ တစ်ဦးအား ကျပ်ငွေ ၅ဝဝ,ဝဝဝ ပေးကား မဲပေါင်း ၁ဝဝ ရအောင် ဝယ်ခိုင်းနေသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။ Source: Palaungwomen
Voters forced to vote for USDP by guard at polling station, who also changed votes cast for / မဲပုံးစောင့်သူ ကြံ့ခိုင်ရေးကို အတင်းအဓမ္မ မဲထည့်ခိုင်းခြင်းကြောင့် ရွာသားနှင့် ပြဿနာတက်နေ
In Nam Sate and Man Sat village tract, Muse district, Northern Shan State, the guard of the polling station forcibly asked people to vote for USDP because there were many votes for the Taaung (Palaung) National Party (TNP), and also changed votes, saidavoter.
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် မန်စပ်အုပ်စု နမ့်စိတ်ကျေးရွာတွင် တအောင်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ TNP ကို ထောက်ခံမဲများနေသည့်အတွက် မဲရုံမဲပုံးစောင့်ကြည့်သူတဦးက ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ကို အတင်းအဓမ္မ မဲထည့်ခိုင်းပေးသကဲ့သို့ အခြားမဲမျာကိုလည်း အမှန်ခြစ်ပေးနေသည်ဟု မဲသွား ပေးသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
Voters in Northern Shan State forced to vote on behalf of prisoners, not allowed to boycott / မဲမပေးချင်လည်း နေလို့ မရ
In Pha Lin village, Nam Hkam Township, Muse district, Northern Shan State, residents were not able to abstain lawfully and on November 6, they were asked to vote on behalf of prisoners who were in jail, villagers said.
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ဖာလင်ကျေးရွာတွင် ဒေသခံများသည် ဥပဒေအရ မဲမပေးပဲ နေနိုင်ခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အရေးမရှိကြောင်းနှင့် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နေ့က ပြစ်မှုနှင့် အကျဉ်းကျခံနေရသော အကျဉ်းသားများအတွက်ပါ ကိုယ်စားပြု ကြိုတင်မဲများ ထည့်ခိုင်းနေသည်ဟု ဒေသခံရွာသားတဦးက ပြောသည်။